Umaki: emisha | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoMashi 4, 2015 Douglas Karr
Njengoba sisebenzisa i-ejensi yethu esiza izinkampani zobuchwepheshe bokumaketha, sazi konke ukuhlenga izilingo nezinsizi zomkhakha we-ejensi. Njengenhlangano yezitolo, sinethuba lokuthi singakhetha kakhulu namakhasimende ethu. Ngakolunye uhlangothi, sivame ukubanzima ngoba izinkampani zamabhizinisi azifuni ukulinganisela enye i-ejensi kumxube wabo wokumaketha. Sike sazithokozisa ngamakhasimende ayinselele embonini yethu. Kepha sekukonke
NgoLwesine, Septhemba 18, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UJascha Kaykas-Wolff
Ukusuka ekwakhiweni kwezakhiwo kuya kwisoftware yokwakha. Ngawo-1950 iModeli yokuThuthukiswa kweMpophoma yafakwa ekwakhiweni nasekuthuthukisweni kwesoftware. Uhlelo luyinsalela yomkhakha wezokukhiqiza lapho, ngokwesidingo, impendulo efanele kwakudingeka yenziwe ngaphambi kokuba umsebenzi uqale. Futhi, kulowo mhlaba, impendulo eyiyo inengqondo! Ungasicabanga yini isimo lapho uthathe isinqumo sokwakha ibhilidi eliphakeme ngokuhlukile phakathi nendawo nokwakhiwa? Lokho kusho, umkhiqizo we-
Ngenkathi okuningi esikubhalela izinkampani kuyizingcezu zobuholi ezicatshangelwayo, ukuphendula imibuzo ebuzwa njalo, nezindaba zamakhasimende - luhlobo olulodwa lokuqukethwe olugqamile. Noma ngabe okuthunyelwe kwebhulogi, i-infographic, iphepha elimhlophe noma ividiyo, okuqukethwe okuhle kakhulu kutshela indaba echazwe noma ekhonjiswe kahle, futhi esekelwa ngocwaningo. Le infographic evela ku-Kapost idonsela ndawonye lokho okwenza kahle kakhulu futhi kuyisibonelo esihle se… inhlanganisela yobuciko
NgoMsombuluko, Septemba 16, 2013 NgoMsombuluko, Septemba 16, 2013 Douglas Karr
Le vidiyo evela kwaSpigit, omemezele ukuhlangana nabaxhasi bethu eMindjet, yenza amaphuzu athile abalulekile kule vidiyo okungafanele anganakwa: Innovation = Ideation + Execution. Imibono ngokwayo ayisiyintsha, kufanele isetshenziselwe. Umbono odume kakhulu akuwona umqondo omuhle ngaso sonke isikhathi wemiphumela yebhizinisi. Imvamisa, sibheke izinkampani ukuthi zinciphise zonke izingqinamba zamakhasimende ukubona kuphela ukuthi ibhizinisi liyahluleka. Kwesinye isikhathi lokho okucelwa yikhasimende akukufanele